Fitaovana IPhone | Vaovao IPhone
Ao amin'ny Actualidad iPhone dia hasehonay anao ny kojakoja tsara indrindra izay natao ho an'ny telefaona Apple. Isan-kerinandro ianao dia hahafantatra fonosana maro isan-karazany hiarovana ny iPhone amin'ny vodin-doha sy ny rangotra miteny ahafahanao mihaino ny mozika ankafizinao, trano na fiara misy anao hampiatoana ny fijanonana, mpamily fiara, tsy misy tanana na kilalao azo fehezina amin'ny iPhone. Izahay koa mitondra ny tsara indrindra fifanarahana amin'ny kojakoja hovidinao Tariby famaranana taratra ary vokatra hafa amin'ny vidiny tsara indrindra
ny alex vincent hace Andro 2 .
ny Karim Hmeidan hace Andro 2 .
Sonos dia nanolotra ny zava-baovaony ary mitondra antsika mpandahateny vaovao ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny izay hahatonga antsika hankafy ny…
Apple dia namoaka fanavaozana firmware vaovao ho an'ny karazana headphone tsy misy tariby izay mahatratra…
ny Karim Hmeidan hace Herinandro 2 .
Herintaona izay no nahazoanay ny AirTag. Fitaovana iray izay toa tsy handeha velively…
Imbetsaka izahay no niresaka momba an'i Sonos, ilay mpanamboatra malaza amin'ny mpandahateny mifandray izay manana lalana mitovy amin'ny Apple….
Androany alakamisy, vao nivoaka ny dikan-teny vaovao momba ny firmware AirTag. Toy ny mahazatra ao amin’ny orinasa,…